Ndiyilungiselele njani iMifanekiso yam eChongiweyo kumaJelo eeNtlalo kunye noKonyusa ukugcwala kwabantu nge-30.9% | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 1, 2021 NgoLwesithathu, Aprili 27, 2022 Douglas Karr
Ekupheleni kuka-Novemba ophelileyo, ndaye ndagqiba kwelokuba ndivavanye ukulungiswa kwe imifanekiso efakiwe kuba Imidiya yokuncokola ukubona ukuba ngaba kuya kuba nasiphi na isibonelelo. Ukuba ubukhe wafunda okanye ubhalisela ixesha elithile, uyazi ukuba ndihlala ndisebenzisa indawo yam kulingo lwam.
Ukuyila umfanekiso onamandla ngakumbi ekwabelwana ngawo kumajelo asekuhlaleni wongeza imizuzu emi-5 okanye eli-10 kulungiselelo lwam lwenqaku ke ngoko ayilotyalo-mali olukhulu lwexesha… kodwa imizuzu ihlala idibanisa kwaye ndifuna ukulumka ukuba ndityala ixesha lam ngobulumko xa kufikwa ku Martech Zone.
Ngelixa bendihlala ndithatha nje iifoto zesitokhwe ezazimele umxholo, ngabom ndizakhele umfanekiso obonisa oku kulandelayo:
ubungakanani -Ndakhe itemplate kwi Umzekeliso oko 1200px ububanzi ngo-675px mde. Ndaye ndaguqula umxholo wam ukubonisa imifanekiso ngeli xabiso liphuculweyo.
UkuBhanisa -Andibandakanyi igama lesiza kodwa ndihlala ndibandakanya ilogo ukuze iqondwe rhoqo kuhlaziyo lwam lweendaba zentlalo.
isihloko -Isihloko esinyanzelisayo esingasoloko sihambelana nesicatshulwa esikwinqaku lam. Ndingasilungiselela isihloko seposi ukuze ndikhangele kodwa ndiphinde ndibhale isihloko kumfanekiso wam ukuzama ukuqhuba ngakumbi ukucofa.
umfanekiso -Ndirhumele kwi Depositphotos Apho ndinokukhangela ngokulula kwaye ndifumane imizekeliso emikhulu endinokuyikhuphela ndiyibandakanye.
Ndisebenzisa Isongezelelo ukupapasha amanqaku am ngokuzenzekelayo kumajelo am entlalontle. Isiphumo si-tweet okanye uhlaziyo lwe-Facebook olume ngokwenene. Nantsi indlela ejongeka ngayo Twitter:
Uyithengisa njani intengiso yedijithali kwiFanele yokuThengisa https://t.co/QMp6i6aq18 #kwimemes pic.twitter.com/3o1O2D6SSB
- martech zone (@kwizik) Februwari 28, 2021
Kwaye kuqhubeke LinkedIn:
Ngenxa yokuba izihloko zibhalwe ngesiNgesi, ndiye ndenza uhlalutyo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndasusa naziphi na izithuba zentsholongwane, ndaza ndabeka umda kubaphulaphuli e-United States, Canada, United Kingdom, New Zealand nase-Australia. Iziphumo bezimangalisa…
Ngaphakathi kuGoogle Analytics, uhlalutyo lwexesha-nangaphezulu lokuhanjiswa kwam kwimidiya yoluntu kubangele 30.9% ukwanda kwimibono yephepha evela kwimithombo yeendaba zentlalo apho imifanekiso yam ebonakalayo yenziwe kakuhle.
Okubangela umdla ngokwaneleyo kukuba, ijelo leendaba zosasazo endilichithe elona xesha lincinci ndisebenza ... kwiphepha likaFacebook, libe nolona nyuso lukhulu… 59.4% inyuke.
Asinto yonke egqibeleleyo… Ndiqaphele ukuba ixesha lam eliphakathi kwiphepha kunye namaphepha ngotyelelo ngalunye lwabatyeleli abatsha beliphantsi (ngaphantsi kwe-10%) ngoko ngelixa nditsala iindwendwe ezininzi, andikenzi msebenzi mkhulu ukuzigcina apha.
Ndiyaqhubeka nokusebenza ndilungiselela indawo kwezinye iindlela, ngakumbi ukuya kumakhulu amanqaku amadala ngeveki, ukuvuselela amanye, ukususa amanye, ukuqondisa kwakhona amaninzi, kunye nokusebenza kumgangatho jikelele wesiza. Ndisebenzise i inkonzo yokuguqulela ezenzekelayo eliye labona inani leendwendwe linyuka lisuka kumazwe angathethi siNgesi.
Iinzame zihlawula kakhulu ekufumaneni… izibalo zonyaka-nangaphezulu kwiintsuku ezingama-30 ezidlulileyo:
Ukugcwala ngokuthe ngqo kunyuke ngama-58.89%
Uphendlo lweOrganic luphezulu ngama-41.18%.
Imithombo yeendaba yezeNtlalontle inyukile ngama-469.70%
Ngokubanzi, indawo yam iphindwe kabini ukugcwala… endonwabe ngayo!
Ufuna uncedo ngokuThengisa ngeDijithali?
Ukuba ungathanda ukuphicothwa kwesiza sakho ngeendlela ezithile ezinokuphucula ukufunyanwa kwakho, zive ukhululekile ukunxibelelana nam kwi Highbridge. Ndingakwenzela uphicotho zincwadi, ndikunike uqeqesho lweqela lakho, okanye ndikuthathe njengomthengi ukukunceda ukuba uphucule iziphumo zakho zentengiso yedijithali. Ndikwazi kakuhle ukusebenza kweWordPress ukuba ufuna iziseko zophuhliso kunye noncedo lophuhliso.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco obulungu beenkonzo ezahlukeneyo kweli nqaku.
tags: imifanekiso efakiweubungakanani bemifanekiso yemidiya yoluntuimifanekiso yemidiya yoluntuimboniso yeendaba zentlaloukugcwala kwimithombo yeendaba zentlalo